ज्योतिषशास्त्र भन्छ : तीन राशिले लगाउनु हुँदैन् सुनका गरगहना, कतै तपाईको राशि त परेन ! – AB Sansar
September 21, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on ज्योतिषशास्त्र भन्छ : तीन राशिले लगाउनु हुँदैन् सुनका गरगहना, कतै तपाईको राशि त परेन !
कहिले काहीं शरीरमा हालत धातुका गहना रहनाले विभिन्न ग्रहको नकारात्मक असर हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सुनका गहनालाई लापरवाही गरेर प्रयोग गर्नु हुँदैन। सुनको गहना लगाएको कारणनै भाग्योदयमा असर पर्न सक्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार विभिन्न तीन राशि हुने व्यक्तिहरुले कहिले पनि सुनको औंठी र गहना लगाउन हुँदैन।
मेष कन्या र धनु राशि भएकाहरुले हातमा सुनका औंठी लगाउँदा मात्रै पनि प्रगतिमा वाधा पुग्न सक्छ। यी तीन राशि भएका व्यक्तिहरु आफ्नो जीवनमा दुख मात्रै पाइरहेका छन् भने हातमा भएका औंठी बेचिहाल्न उचित हुन्छ।यसरी शरीरमा भएको कुनै पनि सुनको गहना बेच्नाले जीवनमा उर्जा थपिने ज्योतिष शास्त्री हरुको भनाइ रहेको छ।
सुन लगाउनाले यी तीन राशि हुनेहरुको घन-सम्पतिमा गलत असर र नकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता रहेको छ।सुन प्रयोग गर्दा १३ तथ्यलाई ख्याल गर्नुस अनि कुन अंगमा सुन लगाउनु हुँदैन जानी राख्नुसमानिसहरु सुनलाई विभिन्न गहना बनाएर लगाउने गर्छन् । सुनका गहना लगाउन मानिसहरु धेरै सौखिन हुन्छन् । पुरुष भन्दा यसको प्रयोग बढि महिलाले गरिरहेका हुन्छन् ।
चाडपर्व, बिबाह आदिमा महिलाहरु बढी सुन लगाउछन् ।हरेक धातुले हाम्रो शरीरलाई कुनै न कुनै असर पारेको हुन्छ । विभिन्न घातुबाट बनेका आभूषण लगाउँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ ।तर गलत तरिकाले गरगहना लगाउँदा अशुभ हुने विश्वास गरिन्छ । सुन पनि एउटा यस्तै धातु हो जसलाई लगाउन जानिएन भने संकट आइ पर्न सक्छ ।सुन प्रयोग गर्दा तलका निम्न १३ तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ
८. सुन भेट्टाउनु वा हराउनु दुबै अशुभ मानिन्छ । सुन हराउँदा बिरामी बिरामी भइने र भेट्टाउँदा खर्च बढ्ने गर्छ ।९. वैवाहिक जीवनलाई सुखी बनाउनका लागि गलामा सुनको सिक्री र कान्छी औंलामा सुनको औंठी लगाउनुपर्छ ।
नेपालमा धेरै भुरे, टाकुरे राजाभन्दा एउटा राजानै ठीक थियो : डा. आचार्य